Kachin Duwa: ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်တွေရဲ့ သမုိုင်းများ ဖျက်ခြင်း။
ခေတ်အဆက်ဆက် လူသားသမုိုင်းမှာ အရေးအကြီးဆုံးဟာ သခ်ျိုင်း ပါ။ နောက်လူတွေ သမုိုင်း အထောက်အထား ပြန်ရှာ ရင် သခ်ျိုင်းမှာ ရှာတတ် ပါတယ်။
ဒီတော့ ဗမာ အစုိုးရ ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ခေတ် အဆက်ဆက် သမုိုင်းအထောက်အထားများ ကုို ဖျက်ပစ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်နုိုင်ငံတွေမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မှတ်တမ်းဟာ သခ်ျိုင်းမှာ ရှိ ပါတယ်။ ရာစုနှစ်များစွာ သူတုို့ မဖျက် ပါဘူး။ သဘာဝဘေး အန္တရယ် ရဲ့ ဖျက်ဆီးမှု ကုိုတောင် ကြိုတင် ကာကွယ်ထားကြပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမှာ ကချင်တွေရဲ့ သခ်ျိုင်း ဘယ် နှခါ ပြောင်းရမှန်းတောင် မသိပါ။
စည်ပင်သာယာ ဥပဒေ အရ ထား ပါ။
ဒါပေမယ့် ပလန ဆုိုတဲ့ ကျေးရွာလေးရဲ့ အဖြစ်ကတော့ ထူးဆန်း ပါတယ်။
ပလန မှာ တရုတ် သခ်ျိုင်း ရှိနေတာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။ လူတုိုင်း သိနေတဲ့ ကိစ္စ ပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ တနေရာထဲမှာ ပဲ ရှိနေတဲ့ ကချင် သခ်ျိုင်းကတော့ ကောင်းကောင်း မနေရပါဘူး။ အစုိုးရ ပုိုင် မြေ တဲ့။ ခုိုင်ခန့်မှုလဲ အတူတူ ပါ။ တရုတ်တွေက ခုိုင်ခုိုင်မာမာ လုပ်ထားလုို့ မဖျက်ရက်ဘူး... ဆုိုရင်.. ကချင်တွေက ဖြစ်သလုို လုပ်ထားလုို့ လား ဆုိုတော့ အတူတူ လောက် ပါ။ သူတုို့လောက် ငွေကြေးမတတ် နုိုင်လုို့သာ မယှဉ်နုိုင်တယ် ထား.. တတ်နုိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး လုပ်ထားတဲ့ အုတ်ဂူများ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဒီနေရာမှာ တရုတ် သခ်ျိုင်းကုို ဖျက်ခုိုင်းတာ မဟုတ်ပါ။ ဘယ်လူမျိုးစု ရဲ့ သမုိုင်းမှ ဖျက်စရာ မလုို ပါ။ နယ်မြေ ထပ် မရှိတော့ရင် တခြားနေရာ ထပ်မြုပ်နှံဖုို့ပဲ ရှိ ပါတယ်။)
Posted by Du Wa at 12:12 AM
Brang Wunpawng February 11, 2014 at 12:12 PM
Du Wa e, grai hkrak ai yaw. Du Wa na post hpe la mat sai yaw. ngai na blog
http://atsammarai.blogspot.com/ kaw mara da yang mai na kun?
Brang Wunpawng February 11, 2014 at 12:13 PM
brangwunpawng.nightmare@gmail.com kaw bai shana ya rit yaw
Card. Gracias in talks with Interior Minister over difficulties Christians face